တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်သွယ်မှုက ဆယ်စုနှစ်သုံးခုအတွင်း ၈၅ ဆ တိုးတက်လာ - Xinhua News Agency
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့တွင် တရုတ်နိုင်ငံက ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးပေးထားသော Binondo-Intramuros တံတား တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၌ အလုပ်လုပ်နေသူများအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (ASEAN) ကြား ကုန်သွယ်ရေးသည် နှစ်ဘက် ဆွေးနွေးဘက်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ၈၅ ဆ မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း တရားဝင်အချက်အလက်များအရ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ၁၂ နှစ်ဆက်တိုက် အာဆီယံ၏ အကြီးဆုံး ကုန်သွယ်ဖက်အဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်ထောက်ဝန်ကြီး Ren Hongbin က ပြောခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် အာဆီယံသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ကုန်သွယ်ဖက်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံကြား နှစ်ဘက်ကုန်သွယ်မှုသည် ဆက်လက်တိုးချဲ့လျက်ရှိပြီး ယမန်နှစ် တိုးတက်မှုထက် ၃၈.၂ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ကြောင်း ဇူလိုင် ၂၉ ရက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ Ren က ပြောကြားခဲ့သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနေဖြင့် ကြည့်မည်ဆိုပါက ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနှင့် အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး စသည့် ကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အတူ အာဆီယံသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အဓိက ပြင်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေရာများနှင့် နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အရင်းအမြစ်များလည်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံကြား အပြန်အလှန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၁၀ ဘီလီယံကျော်ရှိကြောင်း၊ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများတွင် စီမံကိန်းသဘောတူစာချုပ်များမှ တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းဝင်ငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅၀ ဘီလီယံနီးပါးရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် COVID-19 ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ခြင်း၊ ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (RCEP) သဘောတူညီချက်ကို ရှေ့ဆက်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် ပူးတွဲတွန်းအားပေးခြင်းဖြင့် အာဆီယံနှင့် စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး ဆက်ဆံမှု တက်ကြွစွာ မြှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Ren က ဆိုသည်။
၁၈ ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲနှင့် တရုတ်-အာဆီယံ စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအား တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်ရှီးကျွမ့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မြို့တော် နန်နင်းတွင် စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်မှ ၁၃ ရက်အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ဧရိယာ ၁၂၄,၀၀၀ စတုရန်းမီတာ ကျယ်ဝန်းသော ယခုနှစ်၏ပြပွဲတွင် RCEP အဖွဲ့ဝင်များအတွက် အထူးနေရာတစ်ခု ထားရှိမည်ဖြစ်ပြီး ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမတစ်လျှောက်ရှိ နိုင်ငံများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ပိုမိုဖိတ်ကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကွမ်ရှီးဒေသ ဒုတိယ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Liu Hongwu က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-07-29 23:01:16|Editor: huaxia
BEIJING, July 29 (Xinhua) — Trade between China and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) has skyrocketed by 85 times since the two sides established their dialogue relations 30 years ago, official data showed.
With an exhibition area of 124,000 square meters, the expo this year will set upaspecial area for RCEP members and has invited more countries and enterprises along the Belt and Road, according to Liu Hongwu, vice governor of Guangxi. Enditem
Photo : Workers work at the construction site of the China-funded Binondo-Intramuros Bridge in Manila, the Philippines, Nov. 18, 2020. (Xinhua/Rouelle Umali)